1000 imwe-shaft shredder
Imwe-shaft shredder michina inoshandiswa kupwanya iyo yakaoma plastiki, pombi, huni, yemagetsi bhodhi zvichingodaro. Hunhu hwaunogona kuvimbiswa. Semuchina wekuwachisa, isu takave nePatent fomu china hurumende muna 2013.
700 kaviri-shaft shredder
Double-shaft shredder michina inoshandiswa kukwesha ipurasitiki yakapfava, mabhegi akarukwa, machira, marara eguta, zvemagetsi bhodhi zvichingodaro. Hunhu hwaunogona kuvimbiswa. Semuchina wekuwachisa, isu takave nePatent fomu china hurumende muna 2013.
800 kaviri-shaft shredder
630 kaviri-shaft shredder
700 imwe-shaft shredder
630 imwechete-shaft shredder
1200 kaviri-shaft shredder
Maitiro flowof Pellet yekugadzira muchina: Conveyor → mbishi zvinhu compactor (feeder) → Inowedzera system → Die-musoro uye Yekumhanyisa Net kuchinjana system → mvura mhete pelletizing system / sosi yemhando pelletizing system → muchina wemvura